မြို့ နယ်အားလုံး လမ်းမတော်လသာကျောက်တံတားပန်းပဲတန်းပုဇွန်တောင်အလုံကြည့်မြင်တိုင်စမ်းချောင်းဗဟန်းဗိုလ်တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေရန်ကင်းဒဂုံဒဂုံမြို့ သစ် အရှေ့ ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် တောင်ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် ဆိပ်ကမ်းကမာရွတ်အင်းစိန်လှိုင်လှိုင်သာယာမရမ်းကုန်းမင်္ဂလာဒုံမြောက်ဥက္ကလာပတောင်ဥက္ကလာပသင်္ဃန်းကျွန်းသာကေတသံလျင်ဒလဒေါပုံမှော်ဘီလှည်းကူးထန်းတပင်ကော့မှူးခရမ်းကွမ်းခြံကုန်းရွှေပြည်သာတိုက်ကြီးသုံးခွတွံတေးကျောက်တန်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုပုလဲမြို့ သစ်
ပေ(12.5 x 50) ကယျြဝနျးသောပနျးပဲတနျးမွို့နယျရှိတိုကျခနျးငှားမညျ
တိုကျခနျးတညျရှိပုံ အမှတျ(၇၈),၄လှာ,၃၇လမျးအောကျလမျး,ကြောကျတံတားမွို့နယျ,ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး။ တိုကျခနျးဖှဲ့စညျးမှုနှငျ့ပိုငျဆိုငျမှု * ပေ(12.5 x 50)...
နနေနျးသုခ construction Company ကဆောကျလုပျထားသော စတုရနျးပအေကယျြ(739 sqft) ရှိတဲ့ THIN GAN GYUN VILLA က Mini Condo Whole Unit ကို ငှားလိုပါတယျ......
လိပျစာ : အမှတျ(၉) ၊ အောငျမင်ျဂလာလမျး၊(ခ)ရပျကှကျ သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ၊ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး။ - Mini Condo ဖှဲ့စညျးမှုနှငျ့ ပိုငျဆိုငျမှု; စတုရနျးပအေကယျြ (937Sqft ) - 1 master bed room(with air-con) ; 1 common room (with air con) - 1 living room...
စမျးခြောငျးမွို့နယျ အာရှတျောဝငျဆေးရုံအနီးနရောကောငျး ပွငျဆငျပွီးတိုကျခနျးဌားရနျရှိသညျ
စမျးခြောငျးမွို့နယျ၊ အာရှတျောဝငျအနီး နရောကောငျး ၃လှာ ရိုးရိုးအိပျခနျး ၁ခနျး အဲကှနျး ၂လုံး ဘိုထိုငျ အသငျ့နထေိုငျနိုငျ အလုံးစုံပွငျဆငျပွီးတိုကျခနျး အဌားတဈလ -...
$2(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
(43987sqft)8.5RC.28master.lift.transformer 500KVA.ကားပါကငျအစီး40.24hour security. ဈေး 1sqftကို$1.5
( စြေးတနျတနျလေး မရမျးကုနျး YTU အနီး မွညေီ အခနျးကယျြ )
4.20 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
- အငှား ( စြေးတနျတနျလေး မရမျးကုနျး YTU အနီး မွညေီ အခနျးကယျြ ) - 420000 ကပျြ - မရမျးကုနျး မွို့နယျ အေးရိပျငွိမျလမျး - မွညေီထပျ - 20' × 50' ပေ ( 1000 sqft ) - master Bedroom (1) / SingleBedroom (1) အိပျခနျး (2) ခနျး -...
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာတွင် ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားရန်ရှိသည်။
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာတွင် ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားရန်ရှိသည်။ တည်နေရာ- အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊အင်းစိန်မြို့နယ် ။ အကျယ်အဝန်း	- 16x55 အလွှာ	- 2F အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ	-2single bedroom ဈေးနှုန်း	- 2.5...
အခနျး ၂ခနျး ဖှဲ့ပွီး, အဲကှနျး (၂)လုံးပါ, အသငျ့ နထေိုငျနိုငျ, ရခြေိုးခနျး, အိမျသာ ကွှပွေားအပွညျ့ခငျးပွီး... ၁၇ပေ ၅၄ ပေ, ၅လှာ, မာဃလမျး, ပဒသောစြေးအနီး,...
ရွှေညောင် ညောင်ရွှေသွားသည့် လမ်းမဘေးတွင် လုံးချင် RC တစ်ထပ်အိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
တောင်ကြီး	| ရှမ်းပြည်နယ်
800 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရွှေညောင် - ညောင်ရွှေ သွားသည့် ကားလမ်းမဘေး ၊ တောင်ကြီးမြို့အနီး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ။ RC တစ်ထပ်တိုက် master - ၂ ခန်း single - ၁ခန်း ရေချိုးခန်း ၊ အိမ်သာ - ၃ ခန်း ပေ ၄၀×၆၀ အုတ်တံတိုင်းခတ်အပြီး အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးစီး ဈေးနီး ကျောင်းနီး...
Want to Sell Condo in Taung Gyi
700 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Located near Ah Wai Yar Fire Balloon. Shwe Taung Kyar Street, West Circular Road. Taunggyi Water heater. Bathtub in Master Room Flooring - Korea Laminate Own Transformer Security Key lock and Monitor system Lift Access Key.
လှိုင်သာယာ အနောက်ပိုင်းတိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်(WYTU) အနီး ပေ ၁၅၀ ပေ၆၀ ပါမစ်မြေ အရှုပ်အရှင်းကင်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်...
လှိုင်သာယာ အနောက်ပိုင်းတိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်(WYTU) အနီး ပေ ၁၅၀ ပေ၆၀ ပါမစ်မြေ အရှုပ်အရှင်းကင်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်
စြေးတနျ minicondo အခနျး​အရောငျးမြား
ဈေးတန် minicondo အရောင်းများ(South Oakkalarpa) ****************************** တောင်ဥက္ကလာ သုမဂ်လာလမ်းမကြီးပေါ် 1026sqft Hall type 7th floor Lift Generator Price-800သိန်း တောင်ဥက္ကလာ သုမဂ်လာလမ်းမကြီးပေါ် 1026sqft Hall type 7th floor Lift Generator Security Price-850သိန်း သဃ်န်းကျွန်း အတွင်းလမ်းမကျယ်ပေါ် သုမဂ်လာလမ်းမကြီးဒဲ့ပေါက် 1026sqft 5th floor One master bedroom Lift Generator Price-800သိန်း တောင်ဥက္ကလာ ဝေဇယန္တာ citymart အရှေ့ 1026sqft 7th floor One single bedroom One master...
ပေ(25 x55) ကယျြဝနျးသောစမျးခြောငျးမွို့နယျရှိတိုကျခနျး၅လှာပိုငျရှငျကိုယျတိုငျရောငျးမညျ
840 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တိုကျခနျးတညျရှိပုံ အမှတျ(၁၁),၅လှာ,သရကျတောလမျး,စမျးခြောငျးမွို့နယျ,ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး။ တိုကျခနျးဖှဲ့စညျးမှုနှငျ့ပိုငျဆိုငျမှု ပေ(25 x55) ကယျြဝနျးသောစမျးခြောငျးမွို့နယျရှိတိုကျခနျး၅လှာပိုငျရှငျကိုယျတိုငျရောငျးမညျ။ မာစတာအိပျခနျး(၁)ခနျး,အဲကှနျး(၂)လုံး,Waterheater (၁)လုံး တဈအိမျလုံးကြှနျးပါကေးခငျးထားသညျ။မီးဖိုခြောငျကွှပွေားခငျးကပျ,ကြှနျးတံခါးမြားတပျဆငျထားသညျ။လမျးသနျ့,ပတျဝနျးက...
ကျောက်မြောင်း ကျားကွက်သစ်လမ်းအနီး အာသောကဈေးအနီး ရောင်းရန်ရှိ
-	အသင့်နေထိုင်နိုင် -	Eiksar Thaya Street ကျောက်မြောင်း တာမွေမြို့နယ် -	ကျားကွက်သစ်လမ်းမနှင့်နီး -	အာသောကဈေးနှင့်ကပ်ရပ်လမ်းဖြစ်သည် -	အကျယ် 13” x 55” -	၆လွှာ (အပေါ်ဆုံးထပ်) ထပ်ခိုးတင်နိုင် -	ကျွန်းတံခါး Sliding door partition တပ်ဆင်ထားပြီး -	ပါကေးခင်းပြီး -	ရေချိုးခန်း အိမ်သာ (ဘိုထိုင်) ကြွေပြားကပ်ပြီး -	မီးဖိုခန်း၊ ရှေ့ဝရန်တာ ကြွေပြားကပ်ပြီး -	ပြတင်းပေါက်(အားလုံး) သံပန်းတပ်ဆင်ပြီး -	တံခါးပေါက်(အားလုံး)...
950 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
master 1 double room 1 Ac3 living room dinning room 1 lift 24 hour car parking water pump security 24 hours monthly charges 25000kyats lay daung kan main road infront of the B.E.H.S 1(Thingan kyun)
အမှတျ(၄/ခ)မာနျပွေ(၂၁)လမျး အနောကျ ရှိအိမျရောငျးရနျရှိသညျ
880 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
အမှတျ(၄/ခ)၊ မာနျပွေ(၂၁)လမျး၊ အနောကျ ပေ၂၁ x ၆၀ ပေ ဂရံမွေ(မူလပိုငျရှငျ)ပျေါတှငျ နှဈထပျ အုတျနံကပျ အပွညျ့ဆောကျထား ရေ၊ မီး၊ ကွိုးဖုနျး အပါ။ အသငျ့နထေိုငျနိုငျပါသညျ။
၆ ကွေ့အနီး လုံးချင်း၂ ထပ် ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျကိ ၂ လုံး ကျောင်း ဆေးရုံ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ဆေးတက္ကသိုလ်တို့နှင့် နီး အိမ်ငှားတင်ထားသည် ဆက်၍ငှားနိုင်သည် အဝီစိတွင်းတူးပြီး
တောင်ဥက္ကလာပ၊ မေတ္တာလမ်းမပေါ် ၀ဇယန္တာ Citymark အနီး တွင် Mini Condoာရောင်းရန် ရှိပါသည်
1,000 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
For Sell Code Number - SA20 (03/008) တောင်ဥက္ကလာပ၊ မေတ္တာလမ်းမပေါ် ၀ဇယန္တာ Citymark အနီး တွင် Mini Condoာရောင်းရန် ရှိပါသည် 1000sqft, စတုတ္ထထပ် ၊ အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေ ဈေးနှုန်း - ၁၀၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) MP အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် 09 952111337 mprealestateservice@gmail.com https://www.facebook.com/MP-Real-Estate-Service-2104186916515835/ New Mini Condo for Sell at Thingangyun , close to Yadanar road and Wai Zayandar Road 1000sqft, 2nd Floor,2bedroom...